Hague oo ka hadlay shirka London - BBC News Somali
Hague oo ka hadlay shirka London
19 Febraayo 2012
Image caption Xoghaya Arrimaha Dibedda, William Hague waxa uu u warramayay barnaamijka Andrew Marr ee telefishinka BBC 1
Xoghayaha arrimaha dibedda ee waddankan Britain William Hague ayaa sheegay in dowladdiisu ay dooneyso inay xal u hesho mashaakilka Soomaaliya.
William Hague oo u warramayay barnaamijka Andrew Marr ee ka baxa telefihinka BBC One ayaa waxa uu ka hadlayay shirka maalinta khamiista ay martigelineyso dowladda Britain ee ku saabsan xal u helida dhibaatada Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay tahay dalka guuldareystay ee dunida ugu daran, isla markaana masiibada ugu daran ee bini'aadanimo ay ka dhacday.
William Hague waxa uu sheegay in hadda Soomaaliya ay ka jirto fursad, sababtoo ah uu dalku soo hagaagayo.
Waxa uu sheegay in Britian ay iku keeneyso dunida inteeda kale si tallaabo hagaagsan looga qaado sidii loo heli lahaa qorshe siyaasadeed oo hagaagsan, xoojinta ciidamada Midowga Afrika iyo in heshiis caalami ah laga gaaro wax ka qabashada argagaxisnimada iyo burcad badeeda.